यसरी मनाउँदै छन् विराट छुट्टी, बीच जंगलमा समाते पत्नी अनुष्काकाे हात ! - Everest Dainik - News from Nepal
यसरी मनाउँदै छन् विराट छुट्टी, बीच जंगलमा समाते पत्नी अनुष्काकाे हात !
काठमाडौं, माघ २२ । भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहली अहिले आराममा छन् । उनी न्यूजिल्याण्ड विरुद्धको पाँच एकदिवसीय सिरिज अन्तर्गत तीन खेल जिताउँदै उनले आराम लिएका हुन् ।
दुई खेलमा रोहित शर्माले कप्तानी सम्हालेका थिए । यो सिरिज भारतले ४-१ ले जितेको थियो । तीन खेलमा जित हासिल गर्दै सिरिज जिताएर कहाँ छन् त अहिले विराट ? उनका समर्थकलाई चासोको विषय हुनसक्छ । विराट अहिले घुम-घाममा व्यस्त छन् । उनी एक्लै घुम-घाममा छैनन् ।
विराटसँगै चर्चित बलिउड अभिनेत्री एवं उनकी पत्नी अनुश्का शर्मा पनि छिन् । यो जोडी कुनै अन्जान ठाउँमा छुट्टी मनाइरहेको छ । विराटले आफूले छुट्टि मनाइरहेको तस्वीर लागातार सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट गरिरहेका छन् । उनले सामजिक सञ्जालमा सेयर गरेका तस्वीरमा यो चर्चित जोडी कुनै जंगल भित्र प्रवेश गरिहरेको देखाएको छ ।
तस्वीरमा स्पष्ट देखिन्छ कि विराट अनुष्काकाे हात समातेर अगाडि हिडिरहेका छन् । तस्वीर आज विराटले नै आफ्नो इन्टाग्रामबाट पोस्ट गरेका हुन् । हेर्दाहेर्दै दुवैको सुन्दर तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । एक घण्टा भित्र मात्रै यो फोटोलाई ८ लाख बढीले लाइक र करिब ६ हजारले कमेन्ट गरिसकेका छन् । यसअघि, विराटले नदी किनारमा अनुष्कासँग खिचेको तस्वीर पोस्ट गरेका थिए । त्यो फोटो पनि अत्यधिक शेयर भएको छ ।
ट्याग्स: anuska sharma, virat kohli